भेट एक केटी तपाईं साँच्चै जस्तै, रही उनको फोन नम्बर हुन सक्छ एउटा महत्त्वपूर्ण अझै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । स्नायु महसुस, तर यो गर्न आवश्यक छैन एक जटिल वा भारी प्रक्रिया हो । सबै भन्दा राम्रो तरिका प्राप्त गर्न एक केटी गरेको फोन नम्बर बस आकर्षण माध्यम उनको ध्यान दिएर कुराकानी र सोध्न उनको लागि अंक, सीधा पिटफल अलग्गै गर्दा जस्तै उनको वा रही आफ्नो मित्र तपाईं को लागि काम गर्न. हिंडेर शान्त र विश्वस्त छौँ संभावना बनाउन एक राम्रो छाप छ । एक विकि यस्तै विकिपीडिया कि जसको अर्थ, धेरै हाम्रो लेख लिखित छन् ? सिर्जना गर्न, यस लेखमा मान्छे, केही अज्ञात, काम सम्पादन गर्न सुधार र यो समय छ । यो लेख पनि भएको देखी, पटक हो । भेट एक केटी तपाईं साँच्चै जस्तै, रही उनको फोन नम्बर हुन सक्छ एउटा महत्त्वपूर्ण अझै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । स्नायु महसुस, तर यो गर्न आवश्यक छैन एक जटिल वा भारी प्रक्रिया हो । सबै भन्दा राम्रो तरिका प्राप्त गर्न एक केटी गरेको फोन नम्बर बस आकर्षण माध्यम उनको ध्यान दिएर कुराकानी र सोध्न उनको लागि अंक, सीधा पिटफल अलग्गै गर्दा जस्तै उनको वा रही आफ्नो मित्र तपाईं को लागि काम गर्न. हिंडेर शान्त र विश्वस्त छौँ संभावना बनाउन एक राम्रो छाप छ । तपाईं आराम गर्न आवश्यक पहिले तपाईं पनि केटी दृष्टिकोण छ । पनि तपाईंलाई थाहा छ भने तपाईं प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ उनको नम्बर रूपमा चाँडै तपाईं उनको स्थान, यो गर्न सक्षम हुन तपाईं छैन भने चिन्ता नलिनुस् । गर्न सक्षम हुन अर्थमा भने तपाईं स्नायु छौं देखि एक माइल टाढा छ, र तपाईं स्नायु छौं, त्यो हुन पनि भयातुर वा तपाईं तर्साउनु सक्छ उनको बन्द छ । यद्यपि यो सामान्य हुन स्नायु तपाईं महसूस हुनुहुन्छ भने डर वा शर्म, केटी लाग्ला, ‘के संग यो मान्छे छ।’ त्यो विचार हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बन्द बारे तपाईं पनि हुनुहुन्छ भने एक साधारण मामला को. आफैलाई शान्त विचार गरेर सबैभन्दा खराब-मामला परिदृश्य छ । सबैभन्दा खराब कुरा हुन सक्छ कि यो छ: तपाईं सोध्न लागि उनको फोन नम्बर, र त्यो. तपाईं बच्न छ । शायद. तल शान्त छ, यो समय सम्म आउन प्यारा र सनकी आकर्षण छ । आँखा सम्पर्क बनाउन, मुस्कान, र माथि जाने उनको देखाउन उनको के ठूलो मान्छे तपाईं हो. राख्न चाहनुहुन्छ भने उनको कुरा, तपाईं एक महान पहिलो छाप रूपमा चाँडै तपाईं गर्न सक्छन्. यहाँ यो गर्न कसरी गर्ने: विश्वस्त हुन. उनको देखाउन कि तपाईं प्रेम, तपाईं छन् जो तपाईं संग खुसी छौं के तपाईं के, र तपाईं प्रेम बैठक नयाँ मान्छे । यदि त्यो सोच्छ तपाईं राम्रो महसुस तपाईं जो छन्, त्यो छौँ, राम्रो महसुस तपाईं पनि । संभावना छन्, त्यो उत्साहित हुनेछ जब त्यो बाहिर पाता तपाईं रुचि हो उनको, उनको दिन को सबै आफ्नो ध्यान । यो होइन कि तपाईं गर्नुपर्छ. बारी आफ्नो शरीर तिर उनको राखे, आफ्नो फोन दूर, र उनको बनाउन हेर्न भनेर त्यो के भन्छन् तपाईं मामला छ । एक पटक तपाईं प्राप्त बुनियादी बाटो बाहिर, जस्तै तपाईंको नाम र, केटी मा एक गहिरो स्तर छ । यो होइन कि तपाईं सोध्नुपर्छ उनको बारेमा उनको जीवन दर्शन वा बारेमा सबैभन्दा अर्थपूर्ण अनुभव उनको बाल्यकाल, गत सार्न भूमिका छ । यहाँ यो गर्न कसरी गर्ने: उनको बारेमा केही प्रश्नहरू आफु. उनको साक्षात्कार । बस को बारे मा सोध्नु उनको भाइबहिनीहरूको, बारे एक चलचित्र हो त्यो देख्न, वा त्यो के सोच्छ, उनको काम हो । उनको गरौं भनेर हेर्न तपाईं ख्याल उनको राय छ । माथि खोल्न छ । दुवै कुरा नै राशि । गर्न चाहनुहुन्छ मा दबाव राखे उनको सोधेर एक धेरै प्रश्नहरू प्रकट बिना केहि आफैलाई बारेमा, तर तपाईं हुँदैन हग कुराकानी या त.
एक पटक तपाईं निर्माण एक राम्रो तालमेल, सुरु गर्न उनको को मजा बनाउन एक सानो बिट छ । यदि त्यो लगाएका एक स्पष्ट सजावटी सुन हार, यो पकड र’, भन्न छ कि वास्तविक सुन।’ उनको बधाई. उनको त्यो सबैभन्दा सुन्दर महिला तपाईं कहिल्यै देखेका छौँ. बस बताउन उनको त्यो छ अचम्मको हांसो, या कि उनको आँखा छन्, हडताली । जाना छैन. रहन सुन्दर छ । उत्प्रेरित विगतमा भूमिका र उनको सुरुमा, यो समय प्राप्त गर्न उनको जस्तै तपाईं पर्याप्त गर्न चाहनुहुन्छ संग समय खर्च गर्न उनको फेरि । मानिस त्यो प्रतीक्षा गरिएको लागि सबै उनको जीवन त्यो सबै छ लाग्छ छ, ‘अरे, यो मान्छे सुन्दर । म चाहनुहुन्छ, यो बढी छ।’ यहाँ कसरी गर्न उनको प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ, फेरि भेटौला: निर्माण. उनको देखाउन भनेर तपाईं जस्तै उनको, उनको, को अन्त एक तेज कुराकानी । यदि त्यो भन्छन् हास्यास्पद कुरा, जवाफ फिर्ता संग एक हास्यास्पद को सट्टा बस हाँस्न र, भन्दै ‘भन्ने हास्यास्पद छ।’ यो उनको देखाउन कि तपाईं संग राख्न सक्छ भने उनको तपाईं बाहिर रचनाहरू फेरि । प्रकट केहि एक सानो अधिक व्यक्तिगत । प्राप्त छैन, त्यसैले व्यक्तिगत भनेर तपाईं उनको बनाउन असजिलो तर उनको भन्नुहोस् बनाउँछ भन्ने कुरा उनको हृदय ढल्छ बस एक सानो बिट र देख्न कि तपाईं छौं बस सबै बारे मजाक, तर तपाईं साँच्चै एक नरम पक्ष छ । उनको खुला. मा भर पर्नुको एक सानो नजिक र प्रोत्साहन उनको बताउन तपाईं केहि बारे आफु त्यो बताउन छैन बस कुनै. निर्माण सुरु भएको एक बलियो जडान. यो तपाईं सही यो भने. भने केहि सुरुदेखि देखि आफ्नो कुराकानी आउँछ, फेरि माथि तपाईं गर्न सक्छन् उनको प्रभावित गरेर देखाउने कि तपाईं सम्झना त्यो सबै भन्छन्. कुराहरू गर्न संसाधानसंवादआधार, या तपाईं गुमाउन छौँ. बस छौं जब भएको सबैभन्दा मजा कुरा गर्न केटी, वा जब तपाईं छौं, हाँस्न मुश्किल छ, ठीक जब तपाईं सोध्नुपर्छ. तपाईं पुग्न गर्दा जहाँ बिन्दु तपाईं लाग्छ, ‘म भएको छु, यस्तो ठूलो कुरा समय यो केटी यो लागि सोधेर द्वारा उनको फोन नम्बर,’ तपाईं सोध्नुपर्छ तुरुन्तै । यहाँ दुई गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका के यो: उनको बाहिर सोध्न. बरु लागि सोधेर उनको फोन नम्बर सोध्न, उनको एउटा मिति मा बाहिर छ । बीचमा एक ठूलो कुराकानी, बस भन्छन्, ‘म जान छ, तर म साँच्चै माथि राख्न चाहनुहुन्छ यो कुराकानी भन्दा खाने वा पेय अर्को हप्ता.’ यदि त्यो भन्नुहुन्छ त्यो यो चाहन्छु र यो बिन्दु मा, त्यो गर्नुपर्छ, त्यसपछि तपाईं सोध्नुपर्छ लागि उनको नम्बर समन्वय गर्न छ । सोध्न लागि उनको नम्बर सीधा छ । बस जब कुराकानी भइरहेको छ साथै यो गर्न सक्छन्, भन्छन्, ‘अरे, म साँच्चै जस्तै, तपाईं कुरा. संख्या, त्यसैले हामी राख्न सक्छौं कुरा छ।’? यो स्पष्ट बनाउन छौं भनेर सोधेर उनको लागि संख्या किनभने तपाईं रचनाहरू चाहनुहुन्छ, फेरि बाहिर छैन किनभने तपाईं पठाउन चाहेको उनको केटा हेरिसकेकी छ्यौ पदहरू वा किनभने तपाईं प्राप्त एक भीड देखि रही बालिका’ फोन नम्बर. प्रतिक्रिया समुचित. प्रसन्नता र पम्प आफ्नो मुट्ठी मा हावा र भन्छन्, ‘हो।’ जब त्यो उनको नम्बर । बस भन्छन्, ‘भयानक, धन्यवाद,’ र, उनको बताउन छौँ उनको कल. त्यसपछि अलविदा भन्न र हिंड्न बन्द संग आफ्नो टाउको उच्च आयोजित । र त्यो कुनै भन्छन् भने, र यो भन्न छैन, एक समस्या यो ठूलो थियो उनको पूरा गर्न जे भए पनि । स्थान एक बिल्कुल सुन्दर केटी, वा बस एक केटी जो देखिन्छ त प्यारा वा आकर्षक गर्न चाहनुहुन्छ कि थाहा छ, उनको राम्रो, त्यसपछि यो चाँडै सोध्न लागि उनको नम्बर । यस गर्न दुई मिनेट मा, तपाईं बनाउन हरेक दोस्रो गणना । पहिलो, त्यो. त्यो हुन सक्छ खडा गरेर आफु वा गर्लफ्रेन्ड संग, मा लगी छैन, एक गहिरो कुराकानी वा जस्तै देख त्यो. सम्म हिंड्न केटी जस्तै तपाईं एक मिशन मा छौं. सबै पछि, तपाईं छन्. बारी तिर उनको र उनको बताउन आफ्नो नाम । उनको सोध्न के उनको नाम छ । कुनै कुरा के नाम छ, उनको बताउन छ. यो एक सुन्दर नाम । कि उनको बताउन तपाईं बिल्कुल प्राप्त गर्न जा, तर तपाईं थाह चाहन्छु पछुतो मान्ने यो तपाईं छैन गर्नुभयो भने, कम से कम प्राप्त गर्न प्रयास उनको नम्बर छ, त्यसैले तपाईं प्राप्त गर्न सक्छ थाह छ उनको भविष्यमा राम्रो छ । भन्छन्, ‘म साँच्चै इच्छा म प्राप्त गर्न सक्छ थाह अब तपाईं र तपाईं देखाउन के ठूलो मान्छे म हुँ, तर म जा प्राप्त गर्न । संख्या, त्यसैले हामी यस माथि टिप्न पछि.’? यदि त्यो तपाईं दिन्छ उनको नम्बर, उनको धन्यवाद र छौं भन्न उत्साहित प्राप्त गर्न थाहा छ उनको । त्यसपछि दूर हिंड्न चाँडै, तपाईं जस्तै साँच्चै व्यस्त छ । यदि त्यो दिन छैन, यो तपाईं बस हाँस्नुहुन्थ्यो, र भन्छन्, लागि मलाई दोष खोजिरहेको छ।’ सबै पछि, तपाईं बस लिएर एक जोखिम छ । हुन आफैलाई गर्व बनाउन को लागि एक प्रयास । यद्यपि दुई-मिनेट ड्रिल प्रभावकारी हुन सक्छ, दस-दोस्रो ड्रिल आकर्षण कुनै पनि केटी कुनै कुरा कसरी तपाईं हुन् जस्तो लाग्छ. लिन पर्याप्त समय आफैलाई परिचय गर्न केटी सोध्न, उनको नाम, र दिनु उनको चाँडै देख्न छौं कि एक सुन्दर मान्छे त्यो हेर्न चाहन्छु फेरि । तपाईं महसुस भने एक संसाधानसंवादआधार मा कुराकानी, वा केटी राख्छ वरिपरि देख कोठा जाँच, उनको फोन, वा प्रयास संग आँखा सम्पर्क गर्न उनको मित्र त्यसैले तिनीहरू उनको बचत, सम्झना आफ्नो मौका छ । माफ गर्नुहोस्, मित्र. राम्रो किस्मत अर्को समय छ । यदि तपाईं को दुवै गर्न संघर्षरत छन् पाउन केहि भन्न त. किन होला त्यो दिन चाहनुहुन्छ यो गर्न, तपाईं त तपाईं गर्न सक्छन् मा बस्न अप्ठ्यारो मौन अर्को समय केही बढी? यदि त्यो तपाईं बिदा भन्छन् र सुरु दूर हिँडिरहेका. यदि त्यो चाहन्थे तपाईं सोध्न, त्यो.
यो एक कुनै- छ
बीचमा स्कूल मा, तपाईं धारण गर्न आफ्नो ठूलो केटा प्यान्ट र उनको सोध्न. यदि आफ्नो मित्र सोध्न तपाईं को लागि, तपाईं शर्म हेर्न, असुरक्षित, र छैन जस्तै एक वास्तविक मानिस । भने एक केटी, सोच्छ, तपाईं हुनुहुन्न दाबी गर्न पर्याप्त लागि सोध्न उनको फोन नम्बर, कसरी त्यो आशा तपाईं उनको प्रभावित गर्न जब तपाईं बाहिर झुन्डियो. केही मानिसहरू लाग्छ सक्छ, यो एक राम्रो विचार तपाईं को लागि माथि जान केटी र भन्छन्, ‘ओह, गोली, के तपाईं मन भने म यो दिन आफ्नो फोनबाट कल.’ त्यसपछि, केटी हुनेछ प्रौद्योगिकी तपाईं को दिन उनको नम्बर र तपाईं हुनेछ ‘खोज’ भनेर आफ्नो फोन मा आफ्नो खल्ती छ । त्यो के देख्नु छौं सम्म र हुनेछ लाग्छ आफ्नो राम्रो लङ्गडा, केही प्राप्त अंक लागि यो एक, तर यो अधिक संभावना भनेर केटी लाग्छ हुनेछ तपाईं पनि थिए भाग्नुलाई डरछेरुवापन लागि सोध्न उनको नम्बर सामान्य तरिका हो । राम्रो तरिकामा छन् यो बारे मा जाने. एक विधि सामान्यतया काम दिने छ आफ्नो नम्बर । यदि तपाईं प्रयोग बहाना यस्तो छ, ‘म रूपलाई जान एक मिनेट मा छ । यहाँ मेरो नम्बर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं कल वा पाठ मलाई,’ र त्यसपछि उनको लागि प्रतीक्षा गर्न तपाईं दिन उनको. यदि त्यो गरेको एक मान्छे संग, यो शायद उनको प्रेमी वा पति । यो छैन सधैं मामला, तर सावधान हुन । प्रयोग आफ्नो टाउको हेर्न, तिनीहरूले कसरी अन्तरक्रिया, र के के निर्णय छ । बस कुराकानी सुरु संग एक केटी भने त्यो आफु द्वारा वा अन्य मान्छे संग पनि एक पुरुष मित्र । यदि तपाईं पैदल लागि उनको सम्म र केहि भन्न र सुरु प्राप्त गर्न मा एक कुराकानी, त्यो चाँडै तपाईं परिचय. निरुत्साहित नहुनुहोस् भने आफ्नो योजना काम गर्दैन. अधिक समय तपाईं प्रयास लागि सोधेर एक केटी गरेको नम्बर, अधिक संभावना सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न. राम्रो हेर्न लगाउने र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो लुगा तपाईं योजना भने मा माग्दै उनको फोन नम्बर, त्यो दिन चाहँदैनौं एक मान्छे उनको नम्बर भने तपाईं खराब गंध वा हेर्न लापरवाहीसंग छ । जब तपाईं कुरा गर्न केटी जस्तै तपाईं, तनाव छैन बारे, तपाईं के गर्नुपर्छ कुरा हो. उनको कुरा गर्न नै बाटो हुनेछ तपाईं कुरा गर्न एक मित्र छ । भन्नुहोस् उनको बारेमा र आफैलाई सोध्न, उनको बारेमा आफु. उनको बाहिर सोध्न र नडराउनुहोस् को अस्वीकार. यदि त्यो गर्छ भन्न कुनै, त्यो आफ्नो समय को लायक छैन. प्रयास गर्न मा सार्न छ.
जब यो हुन्छ
← च्याट भावनाहरु बीस-चार - फ्री भिडियो च्याट संग बालिका
सबै भन्दा राम्रो भिडियो च्याट उपलब्ध →